Natiijooyinka Noocyada iyo Foomamka Wadista Natiijooyinka | Martech Zone
Dhagaystayaashaadu way kala duwan yihiin. In kasta oo laga yaabo inaad qaddarinayso warqad-nuqul-dheer ah, rajo kale ayaa laga yaabaa inay si fudud u rabto inay dib u eegto liiska astaamaha kahor intaanay kula soo xiriirin ganacsi. Tani faahfaahin badan oo ka socota ContentPlus, oo ah adeegga suuq-geynta waxyaabaha ku saleysan Boqortooyada Midowday ee UK, wuxuu bixiyaa aragti guud oo ku saabsan noocyada kala duwan ee waxyaabaha la bixiyo ee jira, sababta ay u shaqeeyaan, iyo xoogaa xog taageer ah. Waxay sidoo kale leeyihiin oo raacaya boostada blog taas oo isku wada xirta.
Isticmaalayaasha internetka waxay noqdeen macaamiil casriyeysan waxyaabaha sannadihii la soo dhaafay, dookhyadooduna way sii socdaan. Way dhammaadeen maalmihii ay magacyadu ku qancin karaan baahida dhagaystayaashooda iyagoo daabacaya kaliya qoraallo heer sare ah oo gudbinaya macluumaad la mid ah qof kasta oo kale oo ka tirsan warshadooda. Hay'adaha sida wanaagsan uga faa'iideysta suuqgeynta waxyaabaha maanta jira ayaa ah kuwa ku soo gudbiya waxyaabaha ku kalifaya qaababka ay doorbidaan dhagaystayaashoodu, waana tan mawduuceena Istaraatijiyad Macluumaad Macluumaad cusub ah oo xul ah 'n' Mix.
Tags: blogposts blogdaraasadofarriimaha facebookmuuqaaladaboggaga soo degayaMacluumaadka SuuqgeyntaNewswargeysyadaTwittervideoswebsitewhitepapers
5 Xeelado Weyn oo SEO ah oo Fanaaniinta Halgamaya ay Adeegsan karaan
Waa maxay $ 100,000 iibsiga Xayeysiinta
Jul 22, 2013 markay ahayd 2:42 AM
Macluumaadka dhalaalaya ee garaafka ah, sifiican loo sawiray, iyo waxa kujira, laakiin macmacaan badan ayaa ilkahaaga qudhmi kara, marka soo jeedintaydu waa inaan ku bilaabo lamaane, oo aan u raaco guusha kahor inta aanad isku dayin dhadhanka iyo noocyada kala duwan.
Jul 22, 2013 markay ahayd 11:37 AM
Dhab ahaantii! Ama keydso qaar ka hadhay oo isticmaal dhammaan. 🙂 Waxaan jecel nahay adeegsiga qoto dheer ee la baaray iyo waxyaabo aad u fiican dhamaan qaababka post boostada blogka waxaa si sahal ah loogu dheereyn karaa warqad cad, warqad cadeyn ah oo la soo bandhigi karo, iyo xaqiiqooyinka oo lagu ridi karo sawir-gacmeed weyn.